काठमाडौंकेन्द्रित नीतिले अटोबजार संकटमा पर्दै छ : विवेक दुगड - Naya Patrika
काठमाडौंकेन्द्रित नीतिले अटोबजार संकटमा पर्दै छ : विवेक दुगड
काठमाडाैं | साउन २५, २०७५
करिब पाँच दशकदेखि अटोमोबाइल्स व्यवसायमा लागेको दुगड ग्रुपले अहिले महिन्द्राका हेभी गाडी, रोयल इन्फिल्ड र पियाजो तीनपांग्रे बिक्री गरिरहेको छ । तर, सरकारले उच्च सिसीका सवारीमा कर बढाउँदा हेभी गाडीको बिक्री प्रभावित हुने देखिएको छ । बजेटले अटो व्यापारमा पारेको प्रभाव, तीनपांग्रेको बजार, दुगड ग्रुपको आगामी योजनालगायतका विषयमा एमभी दुगड ग्रुपका उपाध्यक्ष विवेक दुगडसँग नयाँ पत्रिकाकर्मी नवीन अर्यालले गरेको कुराकानी :
सरकारले हेभी सवारीसाधनमा कर बढाएको छ । यसले पक्कै पनि हेभी बाइक र गाडीको बिक्री प्रभावित होला । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले अटो क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छैन । सवारीसाधन विलासी वस्तु हो । यसमा कर बढाउनैपर्छ भन्ने मात्र रहँदै आएको छ । काठमाडौंबाहिर अझै गाडीको अभाव छ । सडक सञ्जाल बढ्दै छ । तर, सरकार काठमाडौंको ट्राफिक हेरेर नीति बनाउँछ । सरकारले गाडीको उपयोगिताबारे व्याख्या गर्न पनि जानेन । पहाडी भेगमा पावरफुल फोर ह्विल गाडी चाहिन्छ । बाइक पनि हेभी नै चाहिन्छ । महिन्द्राको बोलेरो पहाडी भेगको सार्वजनिक यातायात नै हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर बढाउँदा तत्काल प्रभाव पर्छ । र, यसको ‘पोलिटिकल रियाक्सन’ पनि चाँडै आउँछ । तर, गाडीमा कर बढाउँदा तुलनात्मक रूपमा थोरै मान्छे मात्र प्रभावित हुन्छन् । यही कारण गाडीमा कर बढाउन सरकार तल्लीन हुन्छ । सरकारलाई कर असुल्न अटोमोबाइल्स सजिलो क्षेत्र बनेको छ ।
बजेटमा सवारीसाधनमा कर बढाउनु संस्कृतिकै रूपमा स्थापित भइसकेको हो ?
बजेटले सवारीसाधनमा कर बढाउँछ भन्नेमा व्यापारी र ग्राहक अभ्यस्त भइसकेका छन् । हामी ग्राहकलाई भन्छौँ, बजेट आउँदै छ, गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने किनिहाल्नुस् । नत्र, गाडीको भाउ बढ्नेछ । गाडीमा कर बढ्दा पनि सामान्य लाग्न थालिसक्यो । यो संस्कृतिकै रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यो कहीँ न कहीँ अन्त्य हुनैपर्छ । नत्र अटोमोबाइल्स क्षेत्र संकटमा पर्छ ।
नेपालमा गाडी अत्यधिक महँगो छ र सार्वजनिक यातायात पनि झुर छ । यसतर्फ राज्यको दायित्व के हुनुपर्छ ?
गाडीमा उच्च कर लगाइने मुलुकमा सार्वजनिक यातायात चुस्त हुनुपर्छ । नेपालमा सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा बढी कर लगाइएको छ । तर, सार्वजनिक यातायात एकदमै झुर छ । विकसित मुलुकमा सबैको घरमा गाडी हुन्छ । तैपनि, बिदामा मात्रै गाडी लिएर घुम्न निस्कन्छन् । अरू समय सार्वजनिक यातायात नै बढी प्रयोग गर्छन् । किनकि त्यहाँ सार्वजनिक यातायातमा सहज पहुँच छ । यहाँ सार्वजनिक यातायात राम्रो नभएकै कारण निजी सवारी चढ्नुको विकल्प छैन । सरकार सार्वजनिक यातायात सुधारमै लाग्नुपर्छ । त्यस्तै काठमाडौंमा अन्डरपास, फ्लाई ओभर र वान वे पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
यही अवस्थामा नेपालमा अटो व्यवसायको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अटो व्यवसाय हरेक वर्ष च्यालेन्जिङ भइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा गाडीको व्यापार जोडिएको हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारिए गाडीको बिक्री बढ्छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा गाडी व्यापार पनि घट्छ । पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रको वृद्धि राम्रो भइरहेको छ । उच्च र मध्यम वर्गको उदय भइरहेको छ । यही कारण सवारीसाधन (गाडी, बाइक)को बिक्री पनि बढ्दै गइरहेको हो । हरेक मानिसको सपना घर र गाडी हुन्छ । तर, नेपालमा मध्यम तथा न्यून आय भएकाले गाडीको सपना देख्नै छाडे हुने अवस्था आइसकेको छ ।
अहिले अटोको बजार काठमाडौंबाहिर सिफ्ट भइरहेको छ भनिन्छ । मोफसलमा अटोको बजार कसरी बढ्दै छ ?
पहिले अटोको ९० प्रतिशत व्यापार राजधानीमै हुन्थ्यो । तर, अहिले यसमा क्रमभंग भएको छ । बाहिर पनि अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएको छ । ठूला सहर विकास भइरहेका छन् । विकासको गति पनि बढ्दै छ । काठमाडौंमा पाइने आधारभूत सेवा–सुविधा बाहिर पनि पाइन थालेको छ । बाइकको त ६५ प्रतिशत व्यापार बाहिरै हुन्छ । कार, जिप पनि ५० प्रतिशत बाहिर नै बिक्री हुन्छ । सवारीको वृद्धिदर पनि काठमाडौंमा भन्दा बाहिर नै बढी छ । हामीले पनि ३८ सहरमा उपस्थिति जनाइसकेका छौँ । अझै सेवा विस्तार जारी छ ।
हेभी बाइकमा चर्को कर लगाउँदा रोयल इन्फिल्डको व्यापारमा कत्तिको असर परेको छ ?
बजेटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रोयल इन्फिल्ड छ । रोयल इन्फिल्ड बाइक ३५० सिसीभन्दा कममा छैन । रोयल इन्फिल्ड बाइकको मूल्य न्यूनतम ८० हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म बढेको छ । मूल्य कसरी कम गर्ने भनेर कम्पनीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ । हेभी बाइक बिक्री गर्न मुस्किल नै होलाजस्तो लाग्छ ।
अबको मार्केटिङ स्ट्राटेजी कस्तो हुनेछ ?
नेपालमा बुलेट लोकप्रिय छ । यो बाइक नेपाल सुहाउँदो पनि छ । बुलेट चढेर जताततै जान सकिन्छ । नेपालको बाटो खराब छ, खराब बाटोमा पनि बुलेट कम्फर्ट छ । सबैभन्दा कम एक्सिडेन्टमा बुलेट पर्छ । आकर्षक डिजाइन र पावरफुल इन्जिन छ । पर्फमेन्स उत्कृष्ट छ । चलाउन पनि सजिलो छ । यही कारण बुलेट धेरैको ड्रिम बाइक बनेको छ । बजेटले बाइक महँगो त भएको छ । तर, ग्राहकले कसरी लिन्छन्, हेर्न बाँकी छ । मलाई विश्वास छ, बाइक पारखीले बुलेटलाई माया गरिरहनेछन् । हामी अझ राम्रो सेवा र सुविधा दिन लाग्नेछौँ ।
बिक्रीमा मूल्य त असर पार्ला नि ?
पक्कै पनि मूल्य एउटा प्रमुख पक्ष हो । तर, मूल्य नै सबथोक पनि होइन । सरकारले कर बढाएपछि मूल्य स्वतः बढिहाल्यो । हामी ग्राहकलाई अझ बढी सुविधा दिन केन्द्रित हुनेछौँ । हाम्रो सर्भिस सेन्टर नेपालकै उत्कृष्ट हो । ग्राहकलाई राम्रो प्याकेज दिन लागिपरेका छौँ । हामीले भर्खरै इन्टरनेसनल ट्रेनिङ सेन्टर पनि स्थापना गरेका छौँ । ग्राहकलाई सेल्फ ट्रेनिङ दिन लागेका छौँ ताकि सानोतिनो मर्मत आफैँ गर्न सकोस् । नेपाली सडकमा अहिले करिब ३० हजार रोयल इन्फिल्ड कुद्छन् ।
रोयल इन्फिल्ड पर्यटनसँग पनि जोडिएको हो ?
नेपालमा बाइक टुरिजम विकास गरेकै रोयल इन्फिल्डले हो । यो हामी गर्वका साथ भन्छौँ । रोयल इन्फिल्ड भित्रिएसँगै बाइक टुरिजम पनि सुरु भयो । कतिपय विदेशी बाइक यात्राकै लागि नेपाल आउँछन् । उनीहरू खर्चालु पनि हुन्छन् । नेपालको पहाडी र हिमाली भेग बाइक टुरका लागि विश्वकै उत्कृष्ट छ । मुस्ताङ र बुलेट पर्यायबाची नै बनेको छ । यसले क्लब कल्चर पनि सिकाएको छ ।
दुगड समूह अटो व्यापारमा लागेको ४७ वर्ष पुगिसक्यो । तर, यसबीचमा दुगड ग्रुपबाट निसान फुस्किसकेको छ । कुनै नयाँ ब्रान्ड ल्याउने योजना छ ?
अटोमोबाइल्स मेरा लागि फेमिली लेगेसीभन्दा पनि प्यासोनेट हो । त्यसैले मैले यसलाई मुख्य व्यवसायका रूपमा लिएको छु । मेरा छोराहरूको पनि अटोमोबाइल्समा प्यासन छ । निसान हाम्रो हातबाट फुस्किसकेको छ । तर, अहिले हामी बढी फोकस थ्री ह्विलरमा गरिरहेका छौँ । जनवरीमा पियाजो थ्री ह्विलर्स भित्रिसकेको छ । थ्री ह्विलर तराईमा भरपर्दो सार्वजनिक यातायात बनेको छ । ग्राहकको पनि राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेका छौँ ।
स्थानीय सरकारले मुख्य सडकमा तीनपांग्रे चलाउन रोक्दै छन् । यसले व्यापारमा चुनौती थपिएन र ?
चिनियाँ थ्री ह्विलर्स कम गतिमा दौडिने भएकाले ट्राफिकमा समस्या आएको हो । तर, हामीले ल्याएको पियाजो थ्री ह्विलर्स ५० किलोमिटर गतिमा दौडिन सक्छ । तीव्र गतिमा दौडिने थ्री ह्विलर्सले ट्राफिक समस्या हुँदैन । अहिले बजारमा थ्री ह्विलर्सबीच प्रतिस्पर्धा छ । रिक्सा चलाउनेले राम्रो कमाएका छन् । र, उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार भइरहेको देखिन्छ । हामीले बैंकबाट फाइनान्स गराएर रिक्सा दिन्छौँ । ग्राहकले कमाउँदै किस्ता बुझाउन सक्छ । मूल्यका हिसाबबाट पनि प्रतिस्पर्धीसँग मिल्दोजुल्दो छौँ ।
नेपालमा अझै अटोमोबाइल्समा धेरै अवसर छन् । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न धेरै बाँकी छ । यसैमा नेपालको भविष्य अडिएको छ । अहिले हामीसँग ठूला सडक बनाउने इक्विपमेन्टको कमी छ । हामी पुरानो प्रविधिबाट काम गरिरहेका छौँ । त्यसैले सडक कमजोर बनिरहेका छन् । हामी आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा धेरै प्रोडक्ट लन्च गर्नेछौँ । अहिले महिन्द्राको हेभी भेहिकल बेचिरहेका छौँ । छिट्टै महिन्द्राको ग्रेडर लन्च गर्दै छौँ ।
#अटोबजार संकटमा #विवेक दुगड
मर्केलको अवकाश र पतनोन्मुख जर्मनी
निजी क्षेत्रको सहयोगमा खोलौँ बन्द उद्योग
खोइ त समाजवाद ?